Saddex nin oo u dhashay Waqooyiga Kuuriya oo lagu eedeeyay xattooyo 1.3 Bilyan | Berberanews.com
Home WARARKA Saddex nin oo u dhashay Waqooyiga Kuuriya oo lagu eedeeyay xattooyo 1.3...
Saddex nin oo u dhashay Waqooyiga Kuuriya oo lagu eedeeyay xattooyo 1.3 Bilyan
Saddex qof oo u dhalatay dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu soo oogay dembi ah inay maleegeen shirqool ay ku doonayeen inay ku xadaan lacag dhan 1.3 bilyan oo doollar. Lacagtan ayaa la sheegay in raggan ay doonayeen inay kala baxaan bangiyo iyo xarumo ganacsi oo ku yaalla caalamka.
Saddexda qof oo aanan la xirin ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay adeegsadaan barnaamij dhanka tiknoljiyadda oo ay doonayeen inay u adeegsadaan “xatooyada”
Sidoo kale muwaadin kale o u dhashay dalalka Canada iyo mid u dhashay Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in si sharci darro ah u kala gudbiyeen lacag. Kooxdan ayaa sidoo kale la sheegay inay qeyb ka ahaayeen weerar dhanka intarnetka oo la fuliyay sanadkii 2017-ka, weerarkaas oo waxyeelo ba’an u geystay hannanaka kombyuutarada ee adeegga caafimmaadka ee dalka Ingiriiska.
Mar uu ku dhawaaqayay dembiyada loo heystay raggan ayaa xeer ilaaliyaha guud ee amniga qaranka Mareykanka, John Demers waxaa uu sheegay in dalka Kuuriyada Waqooyi “uu hoy u noqday burcadda intarnetka”.
Mid kamid ah ragga la soo eedeeyay oo lagu magacaabo Park Jin Hyo ayaa laba sano ka hor lagu soo eedeeyay dembi ah in uu ku lug lahaa weerar dhanka intarnetka ah oo lagu qaaday shirkadda sameysay qalabka tiknoljiyadda ee Sonny.
Mr Park, Jon Chang Hyok iyo Kim Il ayaa loo heystaa inay maleegeen shirqool ay doonayeen inay ku fuliyaan wax isdaba marin.
Waaxda cadaaladda ee Mareykanka waxay sheegtay in raggan ay u shaqeeyaan sirdoonka milateriga Kuuriyada Waqooyi.
“Kooxahani Kuuriyada Waqooyi waxay adeegsadaan kombyuutarada halkii ay ahayd inay adeegsadaan qori, lacaga si casri ah loo dhaco halkii ay lacag kaash ah ka dhici lahaayeen bangiyada, waana qolyaha hogaaminaya dhaca bangiyada adduunka oo dhan”, ayuu yiri Demers oo katirsan waaxda cadaaladda ee Mareykanka.
Dhammaan ragga la soo eedeeyay ayaa la aaminsan yahay inay ku sugan yihiin dalka Kuuriyada Waqooyi oo aanan muwaadiniinteeda u gacan gelinin dalka Mareykanka, si loo maxkamadeeyo.
Sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maalma kahor Kuuriyada Waqooyi ku eedeeyay in sidoo kale ay isku dayayeen inay xadaan xogta tiknolojiyadeed ee tallaalka Corona ee ay sameysay shirkadda dawooyinka sameysa ee Pfizer ee Mareykanka laga leeyahay.
Wakaaladda wararka ee Yonhap ee dalkaas ayaa kusoo warrantay in saraakiil ka tirsan sirdoonka Seoul ay gollaha sharci-dejinta ee dalkaas u sheegeen in isku dayga ay sameysay dowladda Kuuriyada Waqooyi, si ay ula soo baxdo xogta la xiriira tallaalka Corona ee ay sameysya shirkadaas oo haatan ay iibsanayaan dalal badan oo caalamka.
BBC-da ayaa isku dayday in arrintan ay wax ka weydiiso shirkadda dawooyinka sameysa ee Pfizer balse ilaa iyo hadda kama aanay soo jawaabin.
Previous articleItoobiya oo Turkiga ka dalbatay inuu dhexdhexaadiyo Sudan
Next articleThe Importance of Agriculture Policy for Agriculture Development Part 2